10 मिनेट Voluminous ओठ
कपडे लागि हैसियतमा साथै रूपमा बाहिरी मा, फैशन परिवर्तन। धेरै दशक पहिले, महिला सौन्दर्य आदर्श ठूलो expressive आँखा र एक enigmatic आधा-मुस्कान संग एक पतली मुख संयुक्त। आज सबै परिवर्तन भएको छ: को शारीरिक आनन्दमा लीन, पूर्ण ओठ - एक मानक अपिल। प्लास्टिक सर्जरी संग खत्म एक विशेष व्यायाम र जनता उपचार, संग शुरू महिलाहरु प्रयोग उपलब्ध बिल्कुल सबै तरिका, को खातिर। सर्जरी बिना ओठ को मात्रा बनाउन कसरी?
को नृत्य खेल लागि संगीत
अपेक्षाकृत नजिकै 1997 नृत्य खेल मा आधिकारिक एक ओलम्पिक खेल रूपमा मान्यता थियो। कुनै पनि खेल छ - ठूलो सम्मान यो विभाग विकासको लागि ठूलो मौका दिन्छ जो उपलब्ध राज्य वित्तीय समर्थन, चयन किनभने। तर, खेल नृत्य लागि आवश्यकताहरु -। को ओलम्पिक खेल बाँकी जस्तै गंभीर के तपाईं आन्दोलन बजान्छं, उडान प्रदर्शन गर्न सक्छन् जो अन्तर्गत उज्ज्वल र catchy चुनिएका छोराछोरी, लागि खेल नृत्य लागि संगीत। कठोर न्यायाधीशहरूले मापदण्ड को एक नम्बर को परिणाम मूल्यांकन पछि: शारीरिक बल (नृत्य खेल लागि संगीत र तीव्र गति मा जटिल तत्व आवश्यकता)। अनुशासन र टीम आत्मा (संगीत आन्दोलनहरु को स्पष्टता र coherence - सफलता को आधार)। लचीलापन र समन्वय (संगीत नृत्य हल र ल्याटिन नृत्य, उदाहरणका लागि, rumba, जटिल gymnastic आन्दोलनहरु को प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ)। ग्रेस र शैली (नृत्य लागि संगीत आफ्नो अद्वितीय mannerisms प्रदर्शन गर्न कोठा छोडेर)। धैर्य (साम्बाप्रयोगकर्ताडाटाबेसबाटप्रयोगकर्ता जस्तै खेल नृत्य हल नृत्य लागि संगीत अधिक धीरज र प्रशिक्षण को एक उच्च स्तर आवश्यकता बनाउने, श्वसन र हृदय सिस्टम मा एक भारी लोड दिन्छ)। Musicality (छोराछोरीको खेल नृत्य लागि संगीत एक निश्चित लय सेट, र नर्तकियों यो फस्न छैन भने, यो तुरुन्तै सजिलै देखिने छ)। तपाईं संरचना सुन्न नृत्य खेल लागि संगीत संग ड्राइव खोज्न गर्न चाहनुहुन्छ भने - तिनीहरूले अब एकदम धेरै छ छन्, यो खेल तेजी लोकप्रियता प्राप्त छ किनभने। हामी यी वाहक को एक देखि तपाईं गीतहरू सूची प्रदान - सबै गीतहरू मा यस मामला मा चयन गर्दै एक पेशेवर र प्रशिक्षण लागि सिद्ध । Reg Borrachos - Puro रीगेशन foxtrot Bertone गरेको नृत्य हल ओर्केस्ट्रा त्यसैले के नयाँ Moonlight Serenade _ Moonlight Serenade Rumba - स्पेनिश गिटार - तपाईंको आँखाहरु लागि नृत्य हल स्विङ्ग - लिनुहोस् मेरो प्रेम Rumba - मानिसलाई नारी - Harriet एला Fitzgerald _ एक असल रोमान्स Rumba - थमस ऐन्डर्स तपाईं मेरो हृदय Yiu पुन पुन मेरो आत्मा Rumba। हार्लेम गरेको Nocturne - एलिसियाकी कुञ्जी Miguel Saez - Mala Mujer जो Cocker - मेरो हृदय Unchain Sindicato argentino Arriba - चा चा जोस Breves - म चाहन्छु नृत्य Rumba - Piensa एन एमआई - लुसिया Mendez शिक्षण ट्रैक - Rumba Rumba - प्रेम गएका छ जब bachata - XTREME - 24 horas bachata - Aventura - संयुक्त राष्ट्र beso Rumba - Geri Halliwell - कल bachata - समूह Yankees कमाल। Toby प्रेम - Jasmine
बिरालोहरु मा गर्भावस्था
तपाईं घर गर्न बिरालोको बच्चा लिन भने यो बढ्नेछ र बंध्यकरण को मुद्दा सम्बोधन गर्न हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन। यो प्रक्रिया pitomitsy को स्वास्थ्य गर्न एकदम जटिल र खतरनाक छ, र यो मात्र जन्म पछि पूरा गर्न सिफारिस गरिएको छ। सबै मालिक र डाक्टर गर्न आफ्नो बिल्ली लिन र बिरालोको बच्चाहरुको गर्न सहमत हिम्मत छैन। बिरालोहरु मा गर्भावस्था को पहिलो संकेत तपाईं बिल्ली गर्न बिल्ली carted एकपटक आफ्नो राज्य र व्यवहार मा परिवर्तन पालन गर्न थाल्छन्। यहाँ बिरालोहरु मा गर्भावस्था को पहिलो संकेत को एक सूची छ, तपाईं याद गर्न सुरु: तपाईं एक गुलाबी pacifier धनी रंग र noticeably सुनिएको खरिद भने , यो बिरालो gestation बिरालोको बच्चाहरुको तेस्रो हप्ता वरिपरि छ;
प्रशिक्षण लागि वस्त्र
आज, खेल लुगा मा तैयार एक मानिस जरूरी को खेलाडी छैनन्। खेल शैली लामो सान्त्वना र बल खेल को banal किराना displacing, जिम परे गएका, र यो धेरै जिम मा फैशन र शुरू भएको छ। अब, यो कार्यस्थल, नाइट क्लब, रेस्टुरेन्ट, पुस्तकालयमा खेल मा तैयार मान्छे भेट्न अचम्मको छैन। विश्व तलमाथि भयो छ, र हामी सबै यो बुझ्न र प्रशिक्षण लागि सही लुगा छनौट गर्न छ। हामी सिंथेटिक्स लागि हो!
लामो-चिरकालीन नङ पलिश
एक भवन बिना क्लासिक मैनीक्योर एक प्रेमी र lacquer तह को fragility को जेल वार्निश परिचित समस्या को प्रयोग। बस2पछि -3दिन marigolds पानी र घरेलू सफाई उत्पादनहरु संग सम्पर्क न्यूनतम थियो पनि भने, कारण दरारें र चिप्स एउटा आकर्षक उपस्थिति गुमाउन। बजार मा उपलब्ध उत्पादनहरु बीचमा सबैभन्दा प्रतिरोधी के नङ पलिश आज विचार गर्नुहोस्। व्यावसायिक स्थायी नङ पलिश एसपीए RETUAL सबैभन्दा टिकाउ कोटिंग्स रूपमा एक प्रतिष्ठा प्रयोग गर्दछ। यो कम्पनी वार्निश गुणस्तर ख्याल राख्नुहुन्छ, तर पनि वातावरण जोगाउन मात्र। नङ पलिश को बास्ना यो स्वीकार छ रूपमा तेज छैन किनभने अधिक 70% द्वारा उत्पादन को संरचना, जैविक मूल को प्राकृतिक सामाग्री बना। एसपीए RETUAL, एक हप्ता कम्तीमा, सजिलो लागू गर्न र लगभग चाँडै हटाइयो सच्याउन आवश्यक छैन धारण 12 USD लागत बजार, दुर्भाग्य, यो उत्पादन को fakes को धेरै छ। चीन Glaze व्यावसायिक श्रृंखला देखि अर्को धेरै प्रतिरोधी नङ पलिश। चाँडै, आफ्नो नङ मा dries कम5दिन, एक बेहोश बास्ना छैन धारण। एकदम voluminous जार - 14 एमएल, lacquer एक लामो समय को लागि भण्डारण र बाहिर सुक्खामा गर्दैन आफूलाई वाहेक। यो 4.
सेतो तल्ला भित्री
अपार्टमेंट को डिजाइन मा काम गर्दा डिजाइनर, पर्खाल संग शुरू सजावटी niches र अतिरिक्त सामान खत्म, खातामा सबै विवरण लिन्छन्। यो परिष्करण तल्ला घर महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,। यहाँ यो सही सामाग्री छनौट र भित्री मा तल्ला को सही रंग चयन गर्न मात्र आवश्यक छ। तपाईं दूर monotony र पट्टाइ देखि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, उत्सव डिजाइन को एक टिप्पणी बनाउन र weightlessness एक भावना सिर्जना, यो भित्री मा सेतो तल्ला तपाईं आवश्यक छ। सेतो साथै एकदम परिसर विस्तार, फर्नीचर, ढोका र पर्खाल लागि सिद्ध पृष्ठभूमि रूपमा सेवा गर्नेछन्। तल coverings अद्वितीय प्रकाश तल्ला यो अगाडि-विभवयुक्त, खत्म नम्र minimalism संग शुरू, कुनै पनि शैली मा एक भित्री बनाउन मौका प्रदान गर्दछ भन्ने छ। यो रंग मा कोठा शान्त, परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण, उत्सव हुन सक्छ। यस्तो राम्रो विकल्प लागि तल्ला ceases: laminate;
मार्च 25 - संस्कृति को दिन
कसरी, "संस्कृति" को धारणा मानव जीवनमा सोच कुनै?